८ मार्च र महिला गौरवको गाथा
सुशीला शर्मा काठमाडौं, २५ फागुन
विश्व चर्चित नारीवादी पत्रकार तथा अभियन्ता ग्लोरिया स्टेनिमका अनुसार ‘समानताका लागि महिला सङ्घर्षको कथा महिला तथा सङ्गठनका लागि मात्र नभएर मानवअधिकारको पक्षधरहरूको संयुक्त पहलकदमी हो ।’
१९औँ शताब्दीको सुरुवाती चरणमा विश्वका केही देशहरूमा औद्योगिकीकरणको चरम अवस्था, जनसंख्या वृद्धि व्यापक रूपमा भइरहेको थियो । विकासका नाउँमा आमूल सिद्धान्तको प्रतिपादनसँगै पुँजीवादको चरम शोषण र अत्याचारले श्रमजीवी महिलाहरू असमानताको जाँतोमुनि पिसिन बाध्य थिए ।
महिला असमानताविरुद्ध सन् १९०८ मा १५ हजार महिलाहरूले न्यूयोर्क शहरमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूको माग मूलतः कारखानामा काम गर्ने श्रम अवधि घटाउनुपर्ने, उपयुक्त तलब तथा मतदानको अधिकारको सवाललाई लिएर मार्चपास गरेका थिए ।
अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीको घोषणापत्रका अनुसार पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस २८ फेबु्रअरी १९०९ मा मनाइएको थियो । अमेरिकामा महिलाहरूले यस महिला दिवसलाई सन् १९१३ सम्म निरन्तर रूपमा मनाएका थिए ।
अन्तरर्राष्ट्रिय महिला दिवस विश्वमै महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक समानता प्राप्तिका खातिर मनाउने गरिन्छ । सन् १९१० मा श्रमिक महिलाहरूको दोस्रो अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोपेनहेगनमा भएको थियो, जसमा जर्मनीको सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवधारणा प्रस्ताव ल्याएको थियो, जसमा नेतृ क्लारा जेट्किनले महिला दिवसलाई संसारभर मनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
सम्मेलनमा महिलाहरूका मागका समर्थनमा १७ देशका विभिन्न सामाजिक संघ, सङ्गठन, सामाजिक पार्टी, श्रमिक महिला सङ्गठनका १ सयभन्दा बढी महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउनेसम्बन्धी निर्णयलाई पछ्याउँदै पहिलो पटक अष्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विट्जरल्याण्डमा १९ मार्च १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो, जुन दिवसका नाराहरू महिलाहरूले पनि मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्ने अधिकार, असमानता र विभेदको अन्त्य आदि थिए ।
सन् १९१३ तथा १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्धको सङ्घारमा रसियन महिलाहरूले शान्तिका लागि अभियान चलाइरहेका थिए । उनीहरूले पहिलो महिला दिवस फेबु्रअरीको अन्तिम आइतबारलाई मानेका थिए । सन् १९१३ मा विभिन्न समयमा भएका एजेण्डा तथा निर्णयहरूलाई पछ्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्चमा मनाउने निर्णय भयो । त्यसैबेलादेखि संसारभर नै ८ मार्चलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालियो ।
सन् १९१४ मा संयुक्त अधिराज्यका महिलाहरूले युद्धविरुद्ध महिलाहरूको एकता प्रदर्शन गरेका थिए । सन् १९१७ मा रसियन महिलाहरूले ‘रोटी र शान्ति’ नाराका साथ हडताल सुरु गरे । यो आन्दोलन प्रथम विश्वयुद्धमा मारिएका २ मिलियन रसियन सैनिक जवानहरूको सम्झना स्वरूप गरिएको थियो ।
निरन्तर ४ दिनसम्मको हडतालपछि रसियन शासक जारले प्रान्तीय सरकारलाई महिलाहरूको मतदान अधिकारको प्रत्याभूति गराउन बल पुग्यो । यो जुलियन क्यालेन्डर २३ फेबु्रअरी १९१७ थियो, जुन ग्रिगोरियन क्यालेन्डरअन्तर्गत ८ मार्च नै पथ्र्यो ।
सन् १९७५ मा आएर संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालेको हो । यसरी विभिन्न कालखण्डमा महिलाहरूको असमानताका विरुद्धको लडाइँपश्चात् महिला सम्बन्धमा समाजको धारणा बदलिएको सम्पूर्ण विश्व नै साक्षी छ, जसमा महिला समानता र सहागिता आदि पर्छन् ।
दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यो छ कि महिलाहरूलाई अझै पुरुष समान ज्याला दिइँदैन । महिलाहरूको अझै पनि व्यवसाय, राजनीतिमा सहभागिता न्यून छ । संसारभर नै महिला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवाहरू पुरुषको तुलनामा कम छन् । यति भईकन पनि महिला आन्दोलनपश्चात् केही सकारात्मक परिवर्तनलाई नकार्न सकिँदैन । ती परिवर्तन भनेका हामीसँग महिला अन्तरिक्ष यात्री छन्, केही देशमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति छन् ।
महिलाहरू परिवार बसाउन र सँगसँगै घरबाहिरका आम्दानीका काम गर्न पनि सक्छन् । महिलाहरूले छनोट गर्न सक्छन । प्रत्येक वर्ष विश्वले महिलाहरूलाई उत्पे्ररित गर्छ र महिलाहरूले आफ्ना उपलब्धिहरूलाई उत्सवको रूपमा मनाइरहेका छन् ।
यस वर्ष ८ मार्चमा हामीले नेपालमा पनि ११०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै छौँ । विश्वभरका महिलाहरू महिला भएर जन्मिएकै आधारमा भेदभावपूर्ण जीवन जीउन बाध्य छन् । प्राकृतिक रूपमा महिला र पुरुष समान हुन् तर समाज र व्यवस्थाले महिलाहरूको समान अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन ।
नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकमा त महिलाहरू पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपले झनै पिछडिएका छन् । हुनत नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणाकालदेखि नै महिलाहरूले पनि प्रतक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो योगदान दिइआएकै हुन् । राजनीतिमा सक्रिय थोरै महिलाहरूमध्ये सहाना प्रधान, मङ्गलादेवी, शैलजा आचार्यलगायतले अथक सङ्र्घष गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीयस्तरमा विभिन्न महिलासम्बन्धी मुद्दामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपालमै पनि कानुन पारित गराउने मामलामा नेपाल अग्रस्थानमा नै छ तर कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या छ । हालसालै पनि आमाको नाममा नागरिकता मुद्दामा बहस चलिरहेको छ । नागरिकताको सवालमा संविधानमा भएका विभेदपूर्ण दफा हटाउनुपर्ने माग चलिरहेका छन् ।
हाम्रा सामाजिक सांस्कृतिक चालचलन, धर्म, कानुन नै पनि, समाज, परिवार, यी सबै परीपाटीहरू पुरुषको पक्षमा निर्माण भएका हुनाले हाम्रो समाज अझै पनि पितृसत्तात्मक व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन भएका छन् ।
पितृसत्तात्मक व्यवस्था भनेको विशेष गरेर सामन्ती, एक समुदायले अर्को समुदाय, एक लिंगले अर्को लिंगलाई हेप्नु, अधिनस्थ राख्ने, समान मानवअधिकारमा अङ्कुश लगाउनु हो । हाल महिलाहरूले समता र न्यायका लागि चलाइरहेको आन्दोलन पुरुषविरोधी आन्दोलन नभई महिला–पुरुष बराबरीका लागि समता र न्यायको आन्दोलन हो ।
यो प्राकृतिक नै हो कि महिला र पुरुष भनेका एक रथका २ पाङ्ग्रा हुन् र यी २ मध्ये एकको अनुपस्थितिमा परिवार, समाज अनि देशकै गाडी गुड्न सक्दैन ।
अब हामी सचेत महिला तथा पुरुषले शहर बजारमा बस्ने महिलाहरूका आमसमस्या, कानुनी असमानतालगायत देशका दुर्गम स्थानमा, तराईमा बस्ने महिलाहरूका आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक हिंसा, बलात्कार, जातीय र सामाजिक विभेद, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथाहरूमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
बोक्सी र छाउपडी प्रथाका कानुन त छन् तर पनि हाम्रो समाजका खराब संस्कृति यसरी जमेर बसेका छन् । मानिसहरूले अझै पनि बोक्सीको नाममा महिलालाई अपहेलित गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, हिंसा गर्ने गर्न छाडेका छैनन् ।
महिलाहरूको महिनावारीलाई लिएर पनि यसलाई अपवित्र मान्दै महिनाको ५ दिनसम्म छुट्टै गोठमा राख्ने र त्यही असुरक्षित गोठमा राखेकै कारण प्रत्येक वर्ष किशोरी तथा महिलाहरूको मृत्यु हुने गरेका घटना सामान्य बन्दै गइरहेका छन् ।
एक अध्ययनले देखाएअनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक ४ जना महिलामा १ जना महिलाले शारीरिक, यौनिक तथा भावनात्मक हिंसाको सामना गरेको देखाएको छ । सयौँ वर्ष अगाडि महिलाहरूले सामाजिक न्यायपूर्ण समाज र समानताका लागि लडेका थिए भने अझैसम्म पनि महिलाप्रतिका अवधारणा र व्यवहारमा समता छाउन सकेको छैन । अझै पनि महिलाहरूले कुरीति, अन्याय, विभेद, असमानताविरुद्ध लडी नै रहनुपर्नेछ, जबसम्म महिला पुरुषबीच न्यायपूर्ण समाज बन्दैन ।
अहिलेसम्म पनि प्राकृतिक रूपमा पुरुष र महिला हुनु अनि महिलाको पाठेघर हुनु अनि अर्को मानव सिर्जनाका लागि पनि किशोरी अवस्था सुरु भएदेखि प्रजनन् उमेर समाप्त हुन्जेलसम्म प्रत्येक महिनावारी हुने कुरालाई हामी महिला या पुरुषले नबुझेकै कारण यो नियमित र प्राकृतिक प्रक्रियालाई नै हामी पवित्र र अपवित्रताको कसीमा राखेर हेर्छौं ।
हाम्रो मानसिक सामाजिक परिपाटीलाई वैज्ञानिक ढंगले अगाडि बढाउन अझै कयौँ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हामी सचेत महिलाहरूले यी र यस्ता समाजमा हुने गरेका विभेद, अन्धविश्वासहरूका विरुद्ध आवाज उठाउनेलगायत समाजमा समान जिम्मेवारीको आधारमा अघि बढ्नुपर्नेछ । तब मात्र ८ मार्चको गौरवशाली इतिहास सार्थकतामा बदलिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २५, २०७६, ०३:१०:००
काेराेना त्रास : खुल्ला प्रकृतिभित्र लुक्न बाध्य मान्छे
प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंको तलब घटाउन मिल्दैन ?
निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व : सरकारलाई अविश्वास कि असहयोग ?